YouTube-DL inodzokera kuGitHub, uye zvinoita sekunge inozviita kuti igare | Linux Vakapindwa muropa
Pakupera kwaGumiguru, iyo RIAA yakakurudzira kuvharwa kwenzvimbo yekuchengetedza , que YouTube-DL Ini ndanga ndichishandisa paGitHub. Akaita saizvozvo netsamba yaakavimbisa kuti aigona kutora matanho epamutemo kune vanogadzira, nekuti software iyi yaishandiswa kurodha zvirimo zvakachengetedzwa. Zvino, isingasviki mwedzi gare gare, iyo repository yadzoreredzwa, uye zvinoita sekunge icharamba ichidaro kwenguva yakareba, seGitHub inovavarira kuzviisa parutivi rwekuvandudza.
La kubviswa kubva panzvimbo YouTube-DL nevamwe vazhinji vaishandisa kodhi yayo yaive otomatiki, saka vazhinji vakanyunyuta. Pakati pezvichemo, akataura iyo Electronic Frontier Foundation (EFF), uyo, pakati pezvimwe zvinhu, anoti iyo software pachayo haisi iro dambudziko, nekuti basa rayo kurodha pasi mavhidhiyo uye izvi zvinogona zvakare kuve zviri pamutemo. Saka GitHub inoita kunge inozvitenda, zvirinani mushure mekunge kodhi yashandurwa nekushandura mitsara mishoma yaitaridzika kunge ine mhosva zvachose.
YouTube-DL inogadzirisa (zvishoma kwazvo) kodhi kuti ive pamutemo
Saka uye sezvavakataura, kuitira kuti YouTube-DL, kana kunyanya yakachengetwa, idzokere kuGitHub, iwe waifanira chete kubvisa zvimwe zvinongedzo kubva kune yako kodhi zvavaishandisa semuenzaniso. Mune iyi mienzaniso, software yakataura nziyo nhatu, uye ndizvo zvavakashandura uye, mukufunga, zvave pamutemo.
GitHub inoti, kubva zvino zvichienda mberi, chii chakaitika nesoftware iyi kurodha pasi mavhidhiyo chichava chakanyanya kunetsa, nekuti ivo vanovandudza maitiro ekudzima kodhi. Pakati pezviyero zvavanotora, vanozoongorora yega uye yega zvirevo, uye pese pazvinogoneka vanozozviisa pachinzvimbo chemugadziri.
Nekudaro, dai iwe waive mushandisi weYouTube-DL uye waishushikana kuti iyo RIAA yaizokudzivirira kubva kushandisa chishandiso chako chaunofarira, dzikama, zvirinani izvozvi. Iye adzoka, uye zvinoita sekunge akazviita kuti agare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » YouTube-DL inodzokera kuGitHub, iyo ichatsigira nevagadziri
Ziva kuti chingave chinonyengera chakashata ... iwe unofanirwa kuenzanisa vhezheni zvekare nezvazvino padanho rekodhi yekodhi pamwe neumwe muenzanisi senge meld kana yakafanana kuti uone zvavari kutamba, kana uchizvinyora, usaise iyo, ishandise kubva kudzimba dzako ne $ ./ youtube- dl
Ndakaiona ichiuya nguva yadarika uye ndanga ndichishandisa vhezheni yechinyakare uye vese vanoenderera vachishanda pano, asi ini ndichaita basa rekuenzanisa faira refaira nefaira kuti ndione kuti zvanyatsochinja.
Kuvimba uye mukurumbira hazviwanzo mune dzino nguva, ndinofunga unonzwisisa chikonzero nei ndichitaura izvi.
Yakasimbiswa muTT neElectroniki Frontier Foundation